Fairtrade: Fotoana ho an'ny Utopias | safidy
Fairtrade: fotoana hanaovana utopias
Fairtrade fotoana hanaovana utopias
in Toekarena hafa, manan-danja
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny talen'ny Kurt Langbein sy ny Tale Jeneralin'ny Fairtrade, Hartwig Kirner tao amin'ny Fairtrade, ny fiaraha-monina taorian'ny fitomboana, ny politika ankehitriny ary ireo olana hafa amin'izao androntsika izao.
ny Helmut Melzer 16. 2018, 19: 51 11.8k Views
Tale Kurt Langbein (Sary an-kavia) manana ny mendri-pankasitrahana indrindra sy tena mahasoa indrindra tato ho ato Takelaka "Fotoana ho an'ny Utopias" nentina tany amin 'ny sinema. Mpanadihady opération Helmut Melzer maka ny fotoana miaraka aminy sy ara-drariny TradeNy talen'ny mpitantana Hartwig Kirner (r.) Mba hitarika resadresaka momba ny antsipiriany, izay hitondray am-bava azy hatrany.
SAFIDY: Omaly no nijery ilay sarimihetsika aho ary tena tiako. Indrindra satria mandeha amin'ny lalana iray, izay misy safidy ihany koa.
KURT LANGBEIN: Ary saika mpirahalahy ao anaty fanahy isika.
SAFIDY: Mpirahalahy am-panahy isika, hoy aho, eto rehetra. Mazava ho azy fa hiresaka momba ny sarimihetsika amin'ny resadresakao izahay saingy te-hanadihady bebe kokoa aho. Ny fifanakalozan-dresaka momba ny fanontaniana iray izay mitranga imbetsaka ao amin'ilay sarimihetsika, izay amin'ny ankapobeny dia ny lohahevitra ataontsika amin'ny ankapobeny, dia ny tena mpitaona. Inona no fomba tsara indrindra hahatratrarana fiovàna be dia be amin'ny fiaraha-monina izay miova hevitra hafa? Mazava ho azy fa maro ny tetik'asa kely izay nentina niaraka, Fairtrade dia hetsika lehibe. Ary ny sarimihetsika momba ny Fairtrade dia mazava ho azy koa mpankafy tsara. Fa: azo ovaina ve ny rafitra misy amin'ny alàlan'ny fanjifana? Betsaka ny olona izay mbola mitandrina tsara ny vidin'ny vokatra iray.
LANGBEIN: Mazava ny valin-teniko. Mino aho fa ny hetsiky ny mpanjifa, na ny marika tena mahaleo tena sy tsara toa an'i Fairtrade, tsy toy ny Schmählabels tarihin'ny indostria, izay tena fanatsarana ny tsena dia tena zava-dehibe tokoa ho an'ny asa fahatsiarovan-tena sy hanomezana ny doka, ary azo ekena ihany koa. ataovy izay hananana mafy ao. Nandeha toy izany koa i Fairphone, mba hiteny izany, ao anatin'ny lojika eny an-tsena hiezaka ny hamokatra vokatra marina, nefa fantatr'izy ireo ihany koa fa tsy misy afa-tsy io ihany. Hitanao koa izany ary tsy afenin'izy ireo izany. Nefa mino aho fa ny tanjona dia mandeha lavitra ary, raha ny lojika dia somary lavitra lavitra, ary izany no atao, ny famotehana ny Iron Curtain, izay antsointsika hoe toekarenan'ny tsena, ny Iron Curtain eo anelanelan'ny mpamokatra sy ny mpanjifa. Ary manantena aho ary hanantena fa ny hetsika toy ny Fairphone dia hanome ny fikambanan'ireo mpanjifa izay liana bebe kokoa amin'ny fifanakalozana mivantana sy fampitaovana mivantana amin'ny mpanjifa. Ary raha ny fotokevitra azo atao, dia midika aho hoe mampiseho ny ohatry ny Hansalim amin'ilay sarimihetsika. Tahaka ny fifanakalozana dia vita tahaka ny fambolena fambolena arintany. Ary nieritreritra ny tenako toy izao: "Tsara izany, tsara izany, saingy tsy izany no lehibe." Ary hitanareo fa mety izany.
Ny 1,5 dia afaka manome olona an-tapitrisany mivantana avy amin'ny tantsaha miaraka amin'ny vokatra voajanahary ara-pisakafoanana voajanahary. Atao mivantana ny fifanakalozana ary esorina ny tsena amin'ity raharaha ity, izay misy valiny mahafatifaty azon'ireo tantsaha mihoatra ny zavatra azon'izy ireo amin'ny vokatra Fairtrade, dia ny 70 isan-jaton'ny ampaham-bolan'ny mpanjifa , Ka izany no ho dingana manaraka.
Amiko dia ireo fiaraha-miasa roa mavitrika miaraka amin'ny herin'ny fanapotehana ity rafitra ara-toekarena ity amin'ny heviny tsara dia tsy mifanohitra, fa tena eo amin'ny tsirairay avy. Fa misy dingana roa amin'ny fampandrosoana izay inoako fa tsy maintsy tanterahina, mba hijanonantsika ny zanatsika sy ny zafikelintsika, tsy hiatrika izany sehatra izany, tsy hananana na kisendrasendra hiaina eto ambonin'ny tany.
HARTWIG KIRNER: Ho ahy dia fomba tokoa izany fomba hanovana an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fanjifana ahalala. Ny fanjifana bebe kokoa dia tsy hanatsara an'izao tontolo izao. Mazava ho azy, raha mividy kiraro bebe kokoa aho, fiara be kokoa, finday bebe kokoa dia tsy mihatsara ny tontolo. Ho tsara kokoa izany amin'ny fividianana am-pahatsorana kokoa. Naneho ohatra ho an'ny tenako manokana aho. Nividy kiraro mora vidy foana aho izao, ary izao dia noporimo roa ny mpivady telo rehefa avy nitafy lamba folo izy ireo satria tena lafo be, nieritreritra aho hoe, "Inona no ataonao? Mandroaka kiraro telo eto ianao ao anatin'ny herintaona, na dia afaka manao izany aza ianao, raha mividy kiraro mahay ianao, izay afaka mitafy fito, valo taona. " izay mahafinaritra ahy kokoa.
Amin'ny teny hafa, ny olana matetika ananantsika dia ny fiheverantsika diso fa ny faharetana dia fanafoanana, izany hoe fialana amin'ny mahasoa ny tena.
Ny olana mitovy dia nisy ny hetsika organika tany am-boalohany, izay noheverinay fa vokatra tsotra fotsiny ireo. Saingy efa ela ilay izy, ny vokatra organika ankehitriny dia lasa iray amin'ireo vokatra tsara. Ary ny fahatsapana fa mbola mila manangona sy mihinana vokatra tsy manimba ny tontolo iainana aho, dia mahatonga ahy manokana sambatra kokoa, toy ny mihinana vokatra aho. Ary io koa dia mihatra amin'ny lafiny rehetra maharitra. Tokony hatsahantsika ny manolotra ity lohahevitra fitohy ity amin'ny rantsantanana misandratra ary mampifandray azy io amin'ny fialàzana sy ny aura ity.
LANGBEIN: Ary izay no tena zava-dehibe indrindra amintsika, saingy mino aho fa manaiky isika rehetra fa mila fampihenana be ny habetsaky ny entana lany. Tsy famerenana izany, fa mety ho tombony amin'ny kalitao fiainana izany. Ao amin'ny Kalkbreite koperativa, izay azo jerena ihany koa amin'ny sarimihetsika, dia mandany ny ampahatelon'ny herin'ny olona amin'ny fiainana toy ny hafa, ny olona dia tsy manao fiara ary izy ireo dia manana fanjifana ambany kokoa isaky ny metatra toradroa. Ireo zavatra rehetra ireo heverinao fa tena tery. Saingy miaina am-pitiavana ry zareo, izany dia fiainana falifaly sy mahafinaritra, olona mahatokin-tena, satria izy rehetra dia mandray ny fanapaha-kevitra rehetra, satria fiaraha-miasa izany no mendrika ny anarany, fa tsy hoe soratra fotsiny.
Ireo ohatra ireo dia mampiseho fa ny fampihenana ny fanjifana amin'ny fomba dia tsy mametra ny kalitaon'ny fiainana. Mifanohitra amin'izany, hoy ny filazan'ny taloha, Andriamatoa Fromm: Ny fandaharana ny maha-izy azy dia tsy hoe tsara kokoa ihany, fa tsara tarehy noho ny fandaharam-potoana misy.
KIRNER: Tsara be izany fanambarana izany. Azoko atao sonia tanteraka izany.
SAFIDY: Saingy manana ny fahatsapana fa ny ankamaroan'ny fiarahamonintsika dia mahazo an'izany sy mahatakatra izany? Miaina ao anaty fiaraha-monina izay mividy firy isan-jaton'ny vokatra Fairtrade isika?
KIRNER: Ankehitriny, salanisanisa tsara tokoa izy io, mihoatra ny antsasaky.
LANGBEIN: Fa tsy ny fanjifana tanteraka.
SAFIDY: Marina mihitsy izany.
LANGBEIN: Maherin'ny antsasaky ny olona no misafidy vokatra voajanahary indraindray.
SAFIDY: Betsaka ny olona no mividy vokatra voajanahary, fa tsy izy ireo ihany, fa isaky ny ankehitriny. Ary izany no tanjona. Ampitoviko ihany koa ity fifaneraserana ity ankehitriny, fa ny momba ny Likes ihany sy ny antsoina hoe izany ihany Clicktivism Tapitra. Midika izany fa mahatsiaro ho mavitrika sy manaiky ianao rehefa manao sonia ny fanangonan-tsonia an-tserasera, izay atao ao anatin'ny segondra 15. Tsara izany ary manan-danja fa tsy tena mafana fo. Ka ny fanontaniako dia: ahoana ny amin'ireo ambiny tsy mandeha, izay azo inoana fa misy tombony 70 tombanana ho an'ny fiarahamonintsika?
LANGBEIN: Ny lafiny iray, tsy isalasalana. Ary mbola gaga aho raha mahita ny distrika fahasivy izay andiana mpianatra, izay rehetra mividy vokatra enti-manana, na dia amin'ny hariva aza. Izany no mahadiso ahy: tena any amin'ny nosy iray aho. Mazava ho azy fa ny fironana manahirana.
Ary raha mijery, ohatra, ny fanjifana sakafo amin'ny ankapobeny, dia mbola lavitra ny fandrosoana isika, satria ny fampandrosoana marina dia antsoina hoe faritra, vaovao ary voajanahary.
Misy famerenana ilaina ilaina mba hisian'ny fambolena tantsaha ary mbola manohy misakafo ara-pahasalamana ara-pahasalamana sy tsy mahomby amin'ny Tontolo Fahatelo isika izao ka manafatra antsasaky ny firenena avy any amin'ny firenena izay zara raha misy olona vitsy loatra Manàna sakafo. Fa ny lafiny hafa, mino aho dia tokony ho efa hita izany. Tsy misy porofo tena manjary any, fa mihamaro hatrany ny olona milaza hoe: "Tsia, aleoko ny mandeha miaraka. Mametraka na miara-miasa amin'ny kozin-tsakafo aho, miasa amina faribolana, mikambana amin'ny hetsika commons na ny toekarena iraisana. "Betsaka ny olona manao dingana mavitrika, saingy amin'ny ankapobeny dia tsy hita tsara izany. Ny tiako holazaina dia famantarana tsara io fangatahana iray io, fa mihena izany ary tsy tena manana akora. Fa ny tsy fahaizan'ireto olona ireto dia fitantarana mahazatra sy sarin'ireo ho avy, izay tena tiantsika hiara-hiaraka. Ary azoko ankehitriny, ohatra, ilay horonantsary ho fandraisana anjara kely amin'ny fitantarana efa mahazatra toy izany ary azoko ihany koa ny hetsika toy ny Fairtrade ho fandraisana anjara amin'ity fitantarana ity. Izao ihany no mila ny fitantarana feno, mila fahitana amin'ny hoavy mampita azy isika: afaka mankany isika. Ity no fiarahamonina aorian'ny fitomboana ary tsy amin'ny kanosa sy lavenona io, fa fiainana tsara io fa momba azy io, fiainana tsara kokoa ary fiainana famonjena. Ary eo isika rehetra dia te handeha. Ary ity fitantarana iraisana ity dia zavatra mbola tsy hita. Ary mino aho fa tokony hanangana an'izany sy hitantara izany izy ireo.
KIRNER: Loza raha nilaza hoe: "Ny hafa tsy mahazo." Tsy marina izany. Raha mijery ny vokatra isam-paritra isika ohatra, dia tena mampanahy be ny Australiana ny mampiasa ny vokatra isam-paritra. Tsy hisy na iray aza avy amin'ny kilasy tsy dia nahita fianarana any ambanivohitr'i Aotrisy izay tsy miteny hoe: "Fierako fa tsara ny mihinana vokatra maniry ao amin'ny faritra misy ahy."
SAFIDY: Fa ny tena atiny dia, rehefa mandeha any amin'ny tsenambarotra izy ireo dia mividy ny voankazo any amin'ny firenena lavitra, na dia misy vokatra any amin'ny faritra aza.
KIRNER: Ny lafiny iray koa. Etsy andaniny, ny tsena lehibe dia mihodina amin'ny fizarana ny sakafo any an-toerana, na any amin'ny faritra ambanivohitra.
Ary tsy kisendrasendra fotsiny io fa vokatry ny faneren'ny mpanjifa maniry sy mila izany. Ary izany dia mila mihamatanjaka ary mila mihazakazaka haingana kokoa.
Na izany aza, ny tsy faharetana henoko avy amin'ny fanontanianao dia zaraiko tanteraka satria tsy manana ny fotoana be sisa isika. Isan-taona dia ampiasaintsika indroa isan-taona ny loharanon'izao tontolo izao, nefa tontolo iray ihany isika. Ka tena manao fotoana tokoa izany fiovana lehibe.
SAFIDY: Raha ny filazanao ny tenanao manokana dia miharihary fa mandeha io fiovana io. Mihevitra aho fa mahatsapa izany rehetra izany. Na ampy izany ary na tena manana 25 taona isika na na mbola tiantsika hijery azy tsikelikely izany, dia io no fanontaniana. Ho ahy, ny fanalahidy dia ny hoe izany ve no tena boka lehibe indrindra. Ohatra raha toa ka mijery ny paikadin'ny toetr'andro isika, izay raha ny faharetana dia miverina dingana roa indray avy amin'ny fahitan'ny ONG maro ...
KIRNER: Saingy tsy afaka manamaivana ny olona tompon'andraikitra aho ary manolotra izany amin'ireo mpanapa-kevitra politika any Vienna na any Brussels. Izaho no tompon'andraikitra ao aminy. Vao androany aho, rehefa namily fiara dia namaky lahatsoratra mahaliana momba ny plastika amin'ny fako organic. Tsy ny politika no misy fa ny olona kamo loatra ka manala ny plastika ao anaty fitoeram-pako. Ny kitapo plastika nariako ao dia mazava ho azy miparitaka eny an-tsaha. Izahay no tompon'andraikitra amin'izany.
Amin'izao fotoana izao dia mampiavaka ny mitsikera ny hetsika maharitra ary milaza fa tsy tompon'andraikitra amin'ny zavatra rehetra ny mpanjifa. Marina izany, nefa izy ireo no tompon'andraikitra betsaka.
LANGBEIN: Saingy tiako ny misoroka ny fandroahana ny politika amin'ny andraikitra ary efa nanondro fa ny ankamaroan'ny fahotana lehibe ara-tontolo iainana farany tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nipoitra noho ny tsy fisian'ny fitsipika. Ary raha manana governemanta isika izay mahita ao amin'ireo fitsipika ireo dia sary saika ataon'ny fahavalo ary milaza fa tsy ilaina izany, dia mety ny fikarakarana. Mino aho fa tsy maintsy mitaky ny politika handika ny siansa momba ny ekolojika ho lalàna, ary mazava ho azy fa ny Vondrona Eropa rehetra dia mitaky fa tsy any Aotrisy ihany. Inona no manakana ny politika tsy hametaka amin'ny plastika tsy misy dikany amin'ny plastika tsy misy dikany amin'ireto farany ireto? Ny mifanohitra amin'izany dia marina, mihamahazo vahana hatrany, mitombo hatrany ireo takelaka vita amin'ny plastika, indrindra amin'ny vokatra mora. Afangaro amin'ny plastika ny zava-drehetra. Mazava ho azy fa afaka na tsy maintsy miditra an-tsehatra ny lalàna, satria ny mpanjifa irery ihany no malemy. Ary mila mandroso politika any isika.
Ary izany dia mety ho lobby. Amin'izao fotoana izao, ny politika momba ny fambolena dia mampiseho tsara hoe vitany ny manao izany, izay ny orinasa lehibe sy ny vola lehibe dia manao mozika, lazaina, ary ny politika iray manontolo no mandihy amin'ity mozika ity.
SAFIDY: Misy ny ohatra tsara indrindra amin'ny glyphosate. Ity fampandrosoana ity dia diso tanteraka amin'ny politika.
LANGBEIN: Eny, ary ny tena olana momba ny glyphosate, raha ny hevitro, amin'ny maha-mpanao gazety ara-pahasalamana azy, dia tsy hoe karsinogenik izany, fa ny tena olana dia ny mozika miaraka ary fihenan'ny fampandrosoana tanteraka ao anatin'ny fambolena, izany hoe ny voa afovoany voajanahary. Ny indostria izao dia manandrana manindry tena amin'ny alàlan'izao tontolo izao sy amin'ny fanampiana ara-politika eropeana. Araka ny hitanao dia afaka manao betsaka ny politika. Amin'izany toe-javatra izany, hiteraka famerana ny voa ny toerana rehetra na aiza na aiza ary ny mpandray anjara kely dia hanana fotoana fohy kokoa noho ny teo aloha.
SAFIDY: Ny loha-hevitra momba ny fanatanterahana ny tena manokana, izay misy koa ny sarimihetsika, misy antony lehibe manosika ny olona amin'ity sehatra ity?
KIRNER: Ny fahatsiarovan-tena, ny fahavonon-tena, hoy aho, satria tsy izaho ilay saribidin'ny fanjifàna, fa mamorona ny fiainako ary manana ny hery hisarika izany. Ity dia zavatra izay, eritreretiko, mila mifantoka bebe kokoa isika. Ny Amerikana dia manana hery matanjaka kokoa noho ny ataontsika any Europe amin'ny fototarazo, ao anatin'ny toe-tsainy fa tompon'andraikitra amin'ny fiainany manokana izy ireo. Indraindray ny eoropeana no manosika an'izany zavatra kely izany.
Ary manaiky aho fa ilaina tanteraka ny fandaminana ara-politika, saingy ataoko fa eo am-pelatanantsika izy io. Ary tsara izany raha afaka manapa-kevitra ho an'ny tenako aho.
Ataoko araka ny itiavako azy ny fiainako, ary tsy hoe noho ny olon-kafa te-hitafy marika manokana aho na angamba tsy maintsy manana fiara roa aho eo anoloana, dia safidiko.
LANGBEIN: Fa ho an'izany koa dia mila fepetra miforitra aho. Ary io endrika fanapaha-tena izay heveriko ho tena zava-dehibe io, satria isika olombelona mila resonans ary mijaly amin'ny maha-vahiny azy, dia ny rafitry ny asa ara-toekarena, izany hoe miasa, dia ny vokatra ara-pambolena miaraka amin'ny tantsaha na ny varotra sy ny indostria. Ny hoe mamporisika ny lalana hivezivezy dia misy vokatra politika. Ary ity vokatra ity dia tsy azo ovana, ary tokony hiverenany.
Ny asa fampiroboroboana endrika ara-toekarena koperativa dia asa ho an'ny politika, ary tokony hitaky an'izany isika. Satria ny iray amin'ny fitondran-tena manokana ary ny iray hafa no asa. Ary ireo endrika fiasa dia amin'izao fotoana izao dia tena lavitra ny endrika efa tadiavin'ny tena. Ary raha mampiroborobo ny famokarana asa tanana indray ianao ary raha manohana ny famokarana ny fambolena any ambanivohitra fa tsy ny indostrian'ny fambolena sy ny indostria goavana dia samy hafa ny toe-piainana.
SAFIDY: Satria miresaka an'izany ianao, mazava ho azy fa azo jerena amin'ny lafiny politika fa ny indostria sy ny orinasa lehibe dia omena fanampiana manokana satria, mazava ho azy, izy ireo dia mamorona ambaratonga hafa tanteraka amin'ny famoronana asa.
KIRNER: Satria tsy maintsy mifanohitra aho izao. Indrindra any Aotrisy, ny orinasa manana salantsalany no mamorona asa.
SAFIDY: Mazava ho azy, raha ny fahitako azy dia mora kokoa ny manatanteraka izany tsotra izao amin'ny fanohanan'ny orinasa lehibe amin'ny fomba isan-karazany mba hitazonana na hanitarana ny asany. Ahoana no ahafahanao mihodina? Amin'ny fampiroboroboana ny SME na ny asa tanana ve?
KIRNER: Ohatra, eo amin'ny sehatry ny angovo koa, tena diso ny mihevitra fa, ohatra, ny famokarana angovo tena ivotoerana izay misy ankehitriny dia mamorona asa bebe kokoa noho ny iray efa namboarina.
Fotoana lehibe ho an'ny asa vaovao hampiroboroboana angovo hafa. Ary mino aho fa isika dia ampahany ary ihany koa ireo mpanapa-kevitra ara-politika amin'ny fisamborana mieritreritra izay voasambotra, izay tsy misy farany.
Satria ny angovo mety hiseho be dia be, ary raha nanandrana nitarika ny rafi-angovo isika ho amin'ny fikarakarana ny fambolena, ny resaka hetra koa, dia mety hiteraka ny asa fa tsy hanimba.
LANGBEIN: Mino koa aho fa tokony homena torohevitra tsara isika mba handeha iray. Satria ny tsindry hitombo dia fananana ao anatin'ny rafitra ara-toekarena eto amintsika, ary mihemotra ny politika, ary ny hany olana dia ny fitomboana. Izany dia tena maro tokoa, tsy vitan'ny hoe tsara ihany fa ny fanjifana loharanon-karena, izay tsy maharitra intsony.
Ary heveriko fa mila mandeha sy mandroso ihany koa isika, fa noho io lozika fitomboana io. Saingy tsy mivelona ny kapitalisma raha tsy misy ny fitomboana, mila izany, ilaintsika mila ny toekarena hafa.
Ary ny endrika fiaraha-miasa amin'ny famokarana dia amin'ny alàlan'ny famaritana ireo lojika. Mazava ho azy, rehefa mifaninana amin'ny rafitra ara-toekarena izy ireo dia voatery manao fandefasana ny marimaritra iraisana ihany izy ireo, saingy ny fanapahan-kevitra sy ny fitsipiky ny fanapahan-kevitra dia tsy mitovy. Azo jerena ihany koa izany any amin'ireo kaoperativa lehibe na fikambanana fiaraha-miasa miasa izay mbola miasa fa tsy hoe marika fotsiny.
Raiffeisen dia koperativa roa taona lasa izay ary io dia orinasa iray manerantany izay tsy mampiasa afa-tsy io anarana io. Ka tsy izay rehetra antsoina hoe koperativa dia koperativa.
Nefa mino aho fa tsara ihany ny manome toro-hevitra antsika ny mpanao politika, fa ny fanombohana sy ny fampielezan-kevitra tahaka izany dia amporisihana satria mampiharihary fotsiny ny toe-karena.
SAFIDY: Keywords Raiffeisen. Ahoana no nahatonga izany? Mazava ho azy fa resaka ora hafa no resahantsika, tsy misy fanontaniana.
LANGBEIN: Raha atao jery todika kely ianao dia hitanao fa na ny hetsika koperativa Raiffeisen tany am-boalohany aza dia tsy te hametra-panontaniana ny rafi-toekarena fa nampiasa endrika fifanakalozana sy endrika fiaraha-miasa eo anilany ihany. Ara-tsaina dia tsy fihetsiketsehana mandrindra rafitra io. Ary ny fihetsiketsehana toy izany, raha tsy mitandrina izy ireo, rehefa tonga amin'ny habeny iray, saika tsy azo lavina fa manambady ny rafitra satria raha tsy izany dia tsy afaka mivoatra izy ireo. Ary izay indrindra no nitranga. Na ireo kaoperativa amin'ny trano lehibe, izay nipoitra tamin'ny fijerena mitovy, dia tafiditra ao anatin'ny rafitra tanteraka. Ino, mino aho fa misy koperativa trano roa na telo mendrika ny anarany, izay tena manandrana manao trano mora sy mahomby ary tsy mampitombo tombony. Ary ny kaoperativa mpanjifa dia niharatsy tao anaty alahelo amin'ny demokrasia sosialy. Fa ny ankamaroany dia nianjera izy ireo satria tsy velona intsony sy nalamina ara-demokratika.
Saingy ny tsy fahombiazan'ny fiarahana niasa izao talohan'ny 150, ny 200 taona dia tsy tokony haka fanahy antsika hiteny fa tsy mandeha ho azy. Misy ohatra iraisam-pirenena izay mampiseho fa efa mandeha izany.
I Mondragón koa any amin'ny firenena Basque, ohatra, dia fiaraha-miasa amin'ny fiaraha-miasa. Teo koa izahay, izay tsy nahita toerana tamin'ny sarimihetsika. Izy ireo dia namoaka ny hevitry ny fiaraha-miasa eo amin'ny orinasa, eo amin'ny orinasa sy ny faritra ary ny andrim-pampianarana fampianarana sy ny ivon-toeram-pikarohana avy any amin'ireo kaoperativa. Mampiseho izany fa afaka mandroso lavitra izany ary misy ny fihetsiketsehana afaka mametra-panontaniana momba ny fanamboarana ny fitomboana sy ny fampitomboana vola.
Ireo mpahay toekarena koa dia tokony hiala ao amin'ny sezafiandrianany sy ny toekarena-ideolojia milamina, izay voaporofo fa diso izany amin'ny tranga maro, ary tena manomboka ny adihevitra momba ny teôsialy momba ny fiaraha-monina taorian'ny fitomboana.
Ary eo ianao dia mila modely sy famindrana, misy lafiny toy izany fidiram-bola azo antoka azo antoka azo antoka fa andraikitra. Hatraiza ny tokony ho foto-kevitry ny dinika. Saingy tsy maintsy mamaha ny fisiany asa ihany koa isika raha ny fahazoana izany, satria raha tsy izany dia hivoatra ny zava-drehetra, ary avy eo ny fanapahana sivily dia manohintohina antsika. Ary mila manombatombana ny asa ara-tsosialy sy ilaina arak'asa noho ny fahazoana fijery hafa, izay mety sy tsy mitombina ihany, ary koa manangana fahatakarana hafa ny fiaraha-miombon'antoka ara-tsosialy.
KIRNER: Ny lohahevitra dia: tsy afaka manakana ny fandrosoana ara-teknolojia isika, fa tsy ho vita tanteraka izany. Tsy voatery ho apokaliptika ianao miteny hoe raha tsy manao izany isika dia ny olon-kafa no manao azy.
Raha atao amin'ny teny hafa, raha tsy manao fanavaozana any Eropa isika dia hisy ny hafa, ary ho afaka hamokatra mora be izy ireo amin'ity sehatra ara-tsena ity dia hanery antsika tsy ho eo amin'ny tsena.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia tsy maintsy mitady fomba hiatrehana azy isika, ary hatramin'izao, raha ny hevitro dia tsy nahomby fotsiny izahay. Misy zavamaniry kely saro-kenatra toa an'io fidiram-bola fototra tsy misy fepetra, izay natsipy tamina hazakazaka fa tena diso fanantenana ireo alternatives aho. Tsy hanana taranaka intsony isika raha hahita vahaolana.
SAFIDY: Fa toa tsy hita ihany fa handeha amin'ny lafiny politika daholo na aiza na aiza. Masinina fanalahidy na hetra milina mpivarotra.
LANGBEIN: Amin'izao fotoana izao dia mifanohitra fotsiny ny zavatra any Aotrisy. Fa raha mahay manantena ianao dia afaka hiteny fa mety fizarana kely fotsiny izany. Satria raha manohy manodina ny politikany an-jambany mihemotra sy mihemotra isika, dia mitondra ny rindrina ny fiarahamonintsika. Ary mieritreritra aho fa mihamaro hatrany ny olona manaiky an'izany.
SAFIDY: Tianay ny fanovana mankany amin'ny faharetana, angovo azo havaozina, ho an'ny modely koperativa, amin'ny fitomboan'ny paositra. Ahoana anefa no fomba hahatratrarana izany? Amin'ny teny hafa, afaka miasa amin'ny rafitra kapitalista ve ity asa ity amin'ny alàlan'ny fitrandrahana ny asan'ny rafitra hanamafisana ny fampandrosoana? Izany no ataon'i Fairtrade. Na tena mitaky fiovana lehibe amin'ny fitsipika izany amin'ny filazana hoe "tena te hanalefaka sy hanova ny kapitalisma isika ankehitriny." Tokony hisy izany amin'ny sehatra ambony kokoa, ohatra, ao amin'ny ambaratonga EU.
LANGBEIN: Na izany na tsy izany, hoy aho. Ny dingana voalohany dia ny mitadidy hoe inona ny 1945 20 sy 30, nandritra ny taona maro, ny politika ara-politika hametrahana ny kapitalisma ho any an-tsinontsinona ary ny mamorona fepetra izay mametra ny voka-dratsin'ny kapitalisma, toy ny kapitalisma ara-bola. Izay ny ampitson'iny.
Ny filaharan'ilay andro dia ny handinika hoe inona ny toe-karena izay tsy afaka amin'ny lojika fitomboana. Ary tsy maintsy misy antony manjaka hafa ankoatra ny fitomboan'ny vola fotsiny amin'ny maha-fitsipika azy, satria raha tsy izany dia hijanona ao amin'ny lojika fitomboana isika ary tsy ho tafavoaka velona ireo orinasa tsy mitombo. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mila karazana hetsika ara-toekarena hafa isika, voalohany aloha ary, manantena fa amin'ny ho avy no endrika fototry ny hetsika ara-toekarena.
KIRNER: Eny, manao sonia an'io fomba io aho.
SAFIDY: Tsy tena mamaly ny fanontaniako akory izany. Ho ahy, ny hevi-dehibe dia: inona ny fanovana fototra hanovana ny toekarena? Ahoana ny fomba fiovan'ny fiarahamonina aorian'ny fitomboana?
KIRNER: Mieritreritra aho fa izay no antony manantanteraka ny hetsika toy ny Fairtrade fa tsy izahay fotsiny, fa maro ny hetsika fiaraha-miasa hafa raha ataon'izy ireo fa tsy mitovy ny zavatra rehetra. Tsy mino isika fa tsy maintsy mitohy. Ary efa miantehitra amin'ny taranaka manaraka aho. Voalaza hatrany fa ny tanora dia mieritreritra zavatra hafa. Tsy marina anefa izany. Rehefa mijery ny halehiben'ny idealy sy ny fieritreretana ny zanako sy ny tontolo iainany ary ny maro hafa any amin'ny sekoly ianarahako handeha hiasa eto aho dia efa velom-pandresena fa mety ho vita haingana izany.
Mihevitra foana isika amin'ireto fivoarana tsipika ireto. Tsy izany anefa. Nahazo taona 15 ihany koa i Fairtrade mba hanombohany, ary nandritra ny folo taona lasa dia nisy fivoarana ambony azo itokisana.
Toy izany koa ho an'ny Bio, mila fotoana lava kokoa io mba hanombohana, ary avy eo dia niakatra. Mety ho haingana be ny fivoarana toy izany. Ny fiara iray, ohatra, tsy manana toe-javatra mitovy amin'ny tanora ankehitriny toa ny nataony tany aloha tany. Mazava ho azy fa mandany ny tanora ny tanora, satria samy te-hanana sy hanana isika rehetra fa tsy araka izay anananay.
LANGBEIN: Hitantsika fa sarotra ny mahita interns afaka mitondra fiara satria tsy maninona na amin'inona ireo olona ireo. Fa te hanampy zavatra hafa aho: misy koa ny herin'ny ohatra sy sary.
Rehefa nihaino anao aho dia nitranga tamiko fa tany Ouganda aho, tany amin'ny toeram-pitrandrahana volamena Fairtrade voalohany tany Afrika. Hitanao izy. Ary tsy haiko ny halalin'izany talohan'izay, fa misy olona 100 an-tapitrisany maro izay miara-miasa amin'ny tanany hangady ny loharanon-karena ivelan'ny tany. Nanana sary hafa tanteraka aho. Olona 100 tapitrisa. Ary eo ianao mahita ny fanovana tsy hita popoka be mitranga any ho an'ny vahoaka izay miasa ato amin'ity toeram-pitrandrahana volamena Fairtrade ity, ao anatin'ny kaoperativa, miara-miasa.
Ny fitsipiky ny fiarovana dia mbola somary tsy miato intsony fa tsy misy maty, saingy misy ny asa mandanjalanja. Azonao atao ny tsy misy mercury ary mahazo 95 isan-jato fa tsy 30 isan-jaton'ny vidin'ny tsenan'izao tontolo izao ho an'ny volanao. Ireo hetsika ireo no nahatonga ny fiainana ho tonga haingana. Tokony aparitaka àry ireo sary ireo satria asehontsika amin'ny olona rehetra te-hanimba na inona na inona amin'ireo vokatra novidiny, fa tsy ilaina ny manimba zavatra miaraka aminy. Ny sary toy izany dia manana hery.
SAFIDY: Mazava ho azy fa be dia be izany. Saingy raha miresaka sary sy tantara isika dia tsy maintsy hitanao ihany koa ny mijery ny tontolon'ny media. Ary satria io toa tsy misy idiran-javatra izany.
KIRNER: Efa fanakorontanana ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao, ary izay no antony ahitako fa tena sarotra ny miditra amin'io tandroka io. Heveriko fa zava-dehibe ho an'ny mpanao gazety ihany ny asany. Saingy manana olana amin'ny fitadiavana tsy tapaka aho ary mitady zavatra izay manaitra ny olona hamaky azy. Raiso, ohatra, ny toe-draharaha politika eto Aotrisy fotsiny. Miaina ao amin'ny firenena iray milamina izahay izay, tato anatin'ny folo taona lasa, dia nisy mpanamboatra pôlitika nahavita asa tsara, mila milaza izany fotsiny ianao. Mazava ho azy, misy zavatra tsy mandeha tsara, fa ny fatra dia nivoahana tamina krizy ara-toekarena isika. Miaina ao amin'ny firenena iray izay tsy misy olona maty mosary intsony isika ary ny fikarakarana ara-pahasalamana. Ka tena ao anatin'ny toe-javatra tsara tokoa isika.
Ary na izany aza, notadiavina tsy tapaka ny tantara ratsy. Mazava ho azy fa mila mamantatra zavatra ihany koa ianao. Raha misy olana mivoaka amin'ny hopitaly dia tsy maintsy haseho izany. Fa olana anefa hoe mifantoka aminy foana ianao.
LANGBEIN: Ny fironana amin'ny haino aman-jery ho an'ny hysteria amin'ny fahombiazan'ny fotoana fohy dia mazava ho an'ny olana. Ary tokony ataontsika rehetra manohitra azy io ary hiezaka hitazomana ny mpiara-miasa amintsika tsy mandroso amin'ity dinika ity. Tsy misy ny tontolon'ny haino aman-jery, saingy misy tontolo iainana samy hafa. Ary eo koa ny tontolon'ny fampahalalam-baovao momba ny fanontaniana maharitra sy ny fijerena sy ny sarin'ny sary sy ny dinika ho avy manentana, ary tokony hamafisina izany. Mazava ho azy fa afaka manao izany ny politika miaraka amin'ny fanampiana sy ny doka avoakany, izay ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao.
SAFIDY: Andao hiverina any amin'ny fanjifana faobe. Raha ny fahitako azy dia mila manova ny soatoavina ny iray.
LANGBEIN: Na ahoana na ahoana.
SAFIDY: Izany no antony nahatongavako tany amin'ny lohahevitra media. Raha ny hevitro dia ny ankamaroan'ny idealy antsika dia mifantoka tanteraka. Ho an'ny maro, ny filamatra ao amin'ny fiaraha-monina eto dia olona manankarena, olona malaza, kintana pop, mpisehatra.
LANGBEIN: Fa maninona ny olona izao no misafidy ny valom-pandraisana havanana na manakaiky lavitra? Satria matahotra izy ireo ary satria mahatsapa ho resy. Tsikaritr'izy ireo fa mihantona izy ireo. Tsikaritrareo fa ampahany kely ihany, ary ao anatin'ny andiany arivo, dia afaka miakatra amin'ireto zava-misy ireto.
Ny ankamaroany dia anisan'ireo resy amin'ity fampandrosoana ity. Amin'ny lafiny iray, misy ny fihetsiky ny olona mandroso, afa-po, fahafaham-po amin'ny fiainana, maniry fiainana hafa, toekarena hafa.
Manantena aho tamim-pahatsorana fa amin'ity fifaninanana ity, ny very sy mpandresy amin'ny fiainana vaovao dia afaka mahazo farany hery amin'ny sary tsara, fiainana tsara kokoa. Amin'izao fotoana izao dia tsy dia manaiky aho.
Ny tiako holazaina dia hoe ny teny hoe tsara kokoa dia lasa teny maloto, tena mivadika mihitsy. Tsaroako, nihalehibe aho tamin'ny fotoana izay ireo ideistaista ireo dia mahery fo, Gandhi ary araka ny niantsoana azy ireo. Ireo no olona tianao hotahafina. Saingy tamin'ny taona fahasivy dia lasa modely amin'ny ankapobeny ny banky Wall Street.
LANGBEIN: Nefa manomboka mivadika izany.
KIRNER: Eny, tsy omen'Andriamanitra.
LANGBEIN: Saingy lasa tsy resaka indrafo fotsiny izao. Io hatezerana io dia azo tarihiny, ary izany no mitranga ankehitriny eo amin'ny fitondra-pon'ny havanana havanana.
SAFIDY: Nefa eo amin'ny lalana tsy izy.
LANGBEIN: Mazava ho azy fa tsy diso lalana. Tsy nomen'Andriamanitra azy hijanona toy izany.
KIRNER: Somary misalasala kokoa aho amin'izao fotoana izao. Ohatra, rehefa mijery an'i Etazonia aho, dia tezitra toa izao ny olona satria mahatsapa fa tsy misy miahy azy ireo. Avy eo mifidy olona iray ianao izay farafaharatsiny mba mody miteny ho azy ireo ary manova zavatra ho azy ireo. Raha mijery ireo lazaina hoe fly-over ireo ianao, hatraiza ny fahoriam-bahoaka nitranga tato anatin'ny folo taona lasa, very asa ary mazava ho azy, ny olona dia hitady ny tena olana, ary izany no voafidy.
Ny fanontaniana dia, ary io ihany koa no hiondrana any Eropa amin'ny ankapobeny: azontsika atao ve ny miresaka amin'ireo olona ireo indray?
Ny tiako holazaina ihany koa dia amin'ny olona elita, tsy tokony hanome ny fahatsapana fa tsy fandaharana ho an'ny kilasy ambony ihany ny fandaharana. Izany no lohahevitra tokony hamindra ny rehetra. Raha mividy vokatra eto aho, toy ny akondro, ohatra, dia tsy mila ilay mpiasa any amin'ny lafiny hafa amin'ny tontolo miaina ao anaty fepetra mahatsiravina aho. Satria tsy mila izany aho.
Ny olona miasa amin'ny orinasa iray dia te hohajaina ary hahazo karama mendrika. Ary miaraka amin'izany dia afaka mahatratra olona efa trosa. Ary mino aho fa mandeha tsara fotsiny i Fairtrade. Ary ny hafa dia afaka manao izany ihany koa, anisan'izany ny régionisation. Ity toekarena fiaraha-miasa ity dia mety ho zavatra azo ampiasaina hanintonana olona.
SAFIDY: Miombon-kevitra aminao tanteraka aho. Mampalahelo fa efa ao anatin'ny toerana sarotra tokoa aho amin'izao mandritra ny resaka rehetra.
KIRNER: Izay ny asanao ihany koa.
SAFIDY: Raha ny marina, izaho koa dia optimista. Saingy mbola tsy ilaina ve ny fitsipika mifanaraka amin'ny zava-misy, ohatra, momba ny ekolojia, momba ny fitaterana vokatra avy, ohatra, ny any China mankany Eropa? Ohatra, ny hetra-haba amin'ny vokatra rehetra izay mandeha lavitra noho ny 300 kilometatra.
LANGBEIN: Amin'ny fanaraha-maso ny hetra ary tsy maintsy fehezina ny hetra. Izy io dia voafehy tanteraka amin'ny lafiny rehetra. Ny fanamafisana ny fidiram-bolan'ny asa dia manafaingana ny fizotran'izay asa ilaina kely kokoa sy kely. Ny fisian'ny fitaterana amin'ny endrika iray dia manosika antsika hanana vokatra tokana izay novokarina tany amin'ny faritra hafa eran'izao tontolo izao satria amidy kely kokoa izy ireo.
Fa raha mijery ny fiantraikany ekolojika momba ity hadalana ity amin'ny fomba, tsy marina ilay volavolan-dalàna. Mila faktiora hafa isika. Mila mitaky politikam-pitandremana isika satria mila izany haingana.
KIRNER: Avy amin'ny vanim-potoana izay nanjary mora kokoa ny vokatra, mba hahafahan'ny olona manome azy ireo ary hitombo ny fanambinana. Fa eo am-baravarana tokana isika izao, izay tsy mandeha intsony io.
Raha mihena ny vokatra dia tsy afaka ny hamorona harena bebe kokoa izahay ho an'ny olona marobe. Azontsika atao izany raha manararaotra ary raha mamolavola ny asa eto an-tany aty Eropa sy Etazonia ary koa any Sina isika.
LANGBEIN: Ny fanjifana maharitra dia tsy ho solon-teny, fa takian'ny ora iray.
KIRNER: Eny. Ity dia zavatra iray tena mety ho motera mafimafy tanteraka amin'ny fitomboan'ny asa. Ary izany fanovana izany amin'ny fisainana hoe, ohatra, dia manovo angovo sy manala ny asa.
Raha mijery irery ny tenantsika, fa mandoa hetra 50 isan-jato isika, ny mpampiasa indray dia 30 isan-jatony, izany vesatra hetra be dia be izany, raha ny tena izy dia an'ny mpiasa. Ny angovo, amin'ny lafiny iray, hetra kely dia ambany. ihany koa Automation, mpiasa milina.
Tsy miteny aho hoe misy ny vahaolana tsotra. Fa raha tsy hataontsika izany tsy ho ela dia hihamafy io fotoana io ary amin'ny farany dia tsy ho feno hetra ny asa. Avy eo dia mila vahaolana hafa isika.
LANGBEIN: Ary mba hiverenako indray ny faniriako mahatsiravina, ireo ohatra ao amin'ny sarimihetsika dia mampiseho fa rehefa mandray ny anjara izay manosika azy ireo sy ny endrik'aina izay itiavany ny olona, ​​dia misy fahaiza-mamorona mihatra. araka ny mahazatra dia tsy mieritreritra ny ho azo atao isika.
Ny 1,5 dia afaka manome sakafo olona an-tapitrisany amin'ny régionario sy fresh organika. Ny olona iray dia mety hanaratsy orinasa iray manerantany toa an'i Unilever ary milaza hoe: Tsia, tsy havelantsika hifindra any Atsinanana ny orinasa, fa hitoeranay mandritra ny telo taona, mandra-pahavitan'ny orinasa.
Raha mitranga eo am-baravarana izany, dia holazaintsika tsirairay fa tsy mandeha mihitsy. Ary indro, nandeha izany. Mampiseho fotsiny izany fa mila mandray an-tànana ny raharaha isika rehetra. Miaina demaokrasia iray isika, ary ao anaty demaokrasia dia mety misy fiantraikan'ny olona ny politika. Andao hanombohana izany.
SAFIDY: Saingy tsy izany angamba no mahasamihafa ny ataon'ireo fihetsika sy fandraisana andraikitra ireo rehefa miantraika mivantana ianao?
LANGBEIN: Eny, fa voakasik'izany avokoa isika rehetra.
SAFIDY: Eny, saingy tsy lavitra antsika izany. Raha mpamboly Australiana aho dia mora kokoa ny mandray an-tanana noho ny mpanjifako izay mividy vokatra voajanahary ankehitriny.
LANGBEIN: Saingy ny fihetsiketsehana toy ny hetsika organika sy ny Fairtrade dia mampiseho fa azo atao, fotoana izay aharihary mazava izay ifandraisako amin'ny fanapahan-kevitra mividy. Ary izany no zava-misy ao, mila manao ireo fifandraisana ireo ianao. Ao anatin'ny fiaraha-monina mifototra amin'ny fizarazaran'ny asa dia tsy afaka mamokatra mivantana ny sary mivantana ny olona, ​​izay mazava ho azy fa ny fomba tiany. Mety mitombina, mazava ho azy, raha fantatry ny mpanjifa ilay mpamboly izay manao legioma, nefa tsy hiasa lalandava izany. Ary fantatrao fa ny mpitrandraka tsirairay ao Katanga, izay manome kobalt ho an'ny bateria amin'ny finday ao anaty finday, dia tsy hahomby io. Saingy azo atao takiana amin'ny alàlan'ny fanomezana ireo fikambanana toa an'i Fairtrade sy ny toy izany, izay mandray an'ity toerana ity sy ny fampahalalana vaovao.
SAFIDY: Ohatra lehibe i Hansalim any Korea Atsimo. Moa ve izany tsy misy any Eropa?
KIRNER: Angamba tsy dia mitovy amin'ny Hansalim, fa ny mpivarotra soisa dia mbola koperativa voalamina ihany. Tena tsara izany, na dia tsy io fifandraisany mivantana amin'ny ambaratonga io aza any Korea Atsimo. Tsy maninona izany, any Soisa ihany, fa tsy araka izay azoko lazaina izany, toy ny any Korea Atsimo.
LANGBEIN: Mino mafy aho fa tena zava-dehibe izany.
SAFIDY: Elanelam-bokatra ve io?
Ary feno fanantenana aho. Farafahakeliny any Alemana, ny fifanakalozan-kevitra dia efa mandeha eo amin'ireto vondron-tsakafo ireto sy ny firaisankina momba ny fambolena miray hina, hatrany amin'ny hetsika miadana, izay samy mizara ity ahiahy ity amin'ny lafiny iray ihany, fa mitoka-monina ihany izy ireo, vokatr'izany fikambanana lehibe iray io.
Satria avy eo, mazava ho azy, ny herin'ity hetsika ity dia toy ny hoe samy miasa samirery ho an'ny tenany manokana. Araka izany dia lasa lavitra be loatra ny isam-batan’olona ary tokony ho any ny koperativa. Antenaiko fa misy ny hetsika.
SAFIDY: I Hansalim dia tsy mpivarotra fa mpivarotra ihany koa? Manana fivarotana ve ianao?
Hansalim dia fiaraha-miasa eo amin'ireo mpamboly madinika 10.000 vitsivitsy izay mpikambana ao amin'io kaoperativa io, ary mpanjifa an-tapitrisany amina fiaraha-miasa ity dia 1,5 an-tapitrisany izay mpikambana amin'ity koperativa ity, ary misy lozika bitika kely azo ampidirina ao, izay mitantana azy, tsy misy afa-tsy 30 isan-jato amin'ny ezaka ao anatin'izany ny fanatsarana ny sakafo Ny famokarana tahu sy ny sisa, mba hamokarana vokatra ara-pambolena 2000 sy hanomezana ny mponina ao an-tanàna miaraka amin'ny faritra ara-paritra sy sakafo ara-pahasalamana ihany, ary saika voajanahary fotsiny.
Ary etsy andaniny, ny mpamboly kely dia manana fomba fijery ara-toekarena, satria raha tokony hoe 20 25 ka 70 isan-jaton'ny vidin'ny mpanjifa dia mahazo XNUMX isan-jato izy ireo. Rehefa afaka izany, ny mpamboly kely dia afaka mivelona, ​​ary ny asan'ny tantsaha dia mety ho lasa matihanina asa izay ahafahan'ny olona mandany ny fotoanany malalaka. Izany no fanalahidy manan-danja amin'ny fivelomana ny rafitry ny tantsaha, ny maha-matihanina ny asan'ny tantsaha, tahaka ny ataon'ny hafa, amin'ny lafiny fiainana. Amin'ny lafiny iray, tsy afaka mandeha any amin'ny trano fivarotana lehibe eny an-tanàna ianao, satria indrisy fa indrisy, ary mividy voankazo voajanahary avy any Chile ao Denn's.
SAFIDY: Ahoana no fahitana izany amin'ny lafiny mpanjifa? Mpikambana ao ve izy ireo?
LANGBEIN: Eny. Ny mpikambana ihany no mahazo ny entany ao.
SAFIDY: Saingy tsy misy mpivarotra lehibe?
LANGBEIN: Varotra 220 ireo, misy vitsivitsy ho avy isan-taona. Isan-taona dia mpikambana mpikambana ao amin'ny 60.000, satria tena manintona. Raha mpikambana ao ianao dia afaka manondro ireo vidiny atolotra any, ny vokatra fa raha tsy izany dia tsy. Ary ny vidiny dia resahina sy arahana isan-taona eo anelanelan'ny mpanjifa sy ny mpamokatra, ka fantatry ny tantsaha fa mahazo ny vidiny raikitra ho an'ny mandarine na ny voam-bavany na soza isan-taona, na inona na inona fiovan'ny tsenam-bary eto an-tany na ny fihenam-bidy hafa.
SAFIDY: Eto isika dia niverina eo amin'ny famoahana ny lanja. Rehefa dinihina tokoa, ny ankamaroan'ny olona dia manomboka orinasa mba hahazoana vola, fa tsy ho velona fotsiny.
LANGBEIN: Holaviko izany raha ny tranga izay. Ny koperativa Hansalim dia naorina talohan'ny 30 taona lasa izay dia hetsika kely toy ny fiaraha-miasa rehetra mety ananantsika ankehitriny ary nitombo tao anatin'ny 30 taona satria manome vola azo antoka sy maharitra ny tantsaha. Mifanohitra tanteraka amin'ny fahantran'ny tantsaha anananay izany, ankoatra ny mpamboly lehibe. Manome ny mpanjifa any an-tanàn-dehibe koa, vokatra vaovao. Io maodely raharaham-barotra io izay mihoatra lavitra noho ny fampitomboana vola fotsiny. Saingy mieritreritra izany aho, ary efa niresaka tsara izahay fa mihamaro hatrany ny olona mikaroka endrika hafa ara-toekarena sy ny fahatsapan'izy ireo manokana, izay mihoatra ny fahazoana vola madio na fampitomboana ny vola ho fiafarany.
KIRNER: Mazava ho azy fa mety ho safidy ho an'ny mpivarotra efa misy ihany koa io. Satria ny varotra amin'ny Internet dia zavatra iray, inoako, mampihorohoro tokoa ity indostria ity, satria ity no dingana manaraka handrosoana an'izany anarana izany. Ary ny vokatra rezionaly, na vokatra izay fantatrao ny niaviany sy ny toerana iasanao miasa ao aoriany, dia zavatra azon'ny mpivarotra isam-paritra manavaka tsara amin'ny mpanelanelana iray tsy fantatra anarana. Ho an'ny fananganana fiaraha-miasa, ny fanontaniana dia sao dia mbola ho haingana ny habe ankehitriny any Aotrisy. Ny tiana dia: koperativa tena tanora izany. Mazava ho azy, rehefa mivoaka ny kaoperativa dia misy fotoana kely foana ao ambadik'ireny. Mahatsiaro ny ohatr'i Nikaragoà foana aho. Ao ianao mitondra fiara avy ao an-tanàna manaraka roa ora aorian'ny zotra. Fa ny olona any dia tsy manana Jeep, izay midika fa lavitra be izy ireo mba hamidy ny entan'izy ireo.
Raha misy kaoperativa manangona kamiao iray ary manangona ireo entana avy amin'ny tantsaha dia dingana lehibe ho azy ireo izany. Ny mpamboly iray any Nikaragoà dia tsy mahazo trosa. Izany hoe afaka mifanolotra isaky ny manana crédit ihany izy ireo. Toy izao ny fomba nandraisana ny rafitra fiaraha-miasa.
LANGBEIN: Eny. Ary vitsy ny tetikasa Fairtrade nalamina fiaraha-miasa.
KIRNER: Manandrana izany izahay amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo gadra varotra efa misy. Ary miezaka manandrana izahay handroso amin'ireo rafitra efa misy. Midika izany fa ny rafitry ny fiaraha-miasa dia novolavolaina teo amin'ireo tantsaha, izay afaka mandefa mivantana mivantana amin'ny mpivarotra any Eropa. Amin'ny ampahany dia mila middlemen ianao, satria mifehy, ohatra, ny fanadiovana ny fomba amam-panao. Fa ny farany ambany dia ny hoe tokony ho lasa mangarahara sy fohy kokoa ny rojo fihenam-bidy, ary koa ny fikorianam-bola, izay mahazo izay, dia tokony ho mangarahara kokoa. Ary izany no hitantsika ankehitriny fa evolisiona lehibe amin'ny famatsiana rojo. Ity teknôlôjia blockchain ity koa dia afaka manana anjara toerana amin'ny famatsiana ny famatsiana dia mora jerena. Noho izany, misy ireo zavatra ho avy izay mety hanjary hanova zavatra betsaka ao anatin'ny folo taona manaraka, 20 taona. Izany no midika hoe, tena mino aho fa mahomby izany.
SAFIDY: Farany, inona no loha laharana voalohany? Inona no tsy maintsy hitranga? Inona no mety ho zavatra lehibe indrindra, boka lehibe indrindra? Efa nolazainay fa tokony hihena araka izany ny mpanjifa, mazava izany. Mila fanerena amin'ny politika ve izany?
LANGBEIN: Manatona ny fanontaniana voalohany indray isika izao, fa efa voavaly ny valiny. Haveriko kely izao.
SAFIDY: Mila teny farany aho.
LANGBEIN: Samy mila io. Ary tsy misy ny lever, fa maro ny lever. Ity ihany koa ny fanatanterahana ny asako tamin'ny horonantsary fa misy fomba hafa samy hafa sy ireo levers samihafa ary dia momba antsika rehetra izany satria nahatsapa izahay fa tsy hiasa izao tontolo izao raha toa isika manohy toy izany Ny varotra, toy ny taloha, dia mandray ny iray amin'ireto mpirotsaka ireto, mety hiara-hiasa, na hiantoka ny fihinana am-paritra sy zava-baovao indray, fa tsy ny lalana manimba ny sakafo sy ny fambolena. Mila mandray an-tanana ny raharaha isika amin'ny fahatsapana herim-po izay tsy ahazoanay vola, ary azo antoka fa tsy avy amin'ity politika ity. Ary maniry ihany koa ity fiainana ity. Amin'ny lafiny iray, mila manohana hetsika ara-toekarena toy ny Fairtrade ihany koa isika, izay mikatsaka ny hamorona mangarahara manan-danja ao amin'ny rojom-pivarotana lehibe amin'ny tsen'izao tontolo izao ary hiantohana ny fepetra milamina amin'ny fanombohan'ity rojo ity. Ny tiana holazaina dia hoe tsapantsika fa manana ny hoavintsika eo an-tanantsika ary afaka manova azy io fotsiny isika raha maka izay anjarantsika eo an-tanantsika.
KIRNER: Ny tena ilainy izao dia ny fahatakarana fa niha-nahazo tsara kokoa an'izao tontolo izao tato anatin'ny folo taona lasa. Tsy toerana kivy izany. Mihatsara sy mihatsara hatrany ho an'ny olona maro izany, miakatra ny fivelarana, miaina ela kokoa, miaina amin'ny fahasalamana kokoa mihoatra ny teo aloha isika. Ary afaka manao izay nolazainay teto, fa tena mila rafitra vaovao isika raha te-ho velona amin'ny onjan'ny teknolojia izay efa tonga amin'izao fotoana izao. Mila fomba vaovao handrosoana isika.
Miaraka amin'ny fanamboarana ireo taonjato farany tsy ireo olana momba ny 21. Voavaha ny taonjato. Tena mila mijery fomba mivaingana isika amin'ny fomba hamahana ny olana sy ny fomba ahafahantsika miaina fiainana mendrika ny zanatsika sy zafikelintsika. Ary ilaina ny fomba vaovao sy ny andraikitry ny isam-batan’olona mba tsy hielezan'ny zavatra tafahoatra ny tany, ary tsy hanahirana ny tenany amin'ny zavatra tsy misy ilana azy, fa ny manangona ny antonony dia handany sakafo mahasalama. Ary mamaha olana be fotsiny izany.
Misaotra anao namaky!
Photo / Video: Melzer / Option.
Previous article Zo momba ny tany ao Amazona Oxfam Etazonia
Lahatsoratra manaraka Vorondolo any amin'ny Ala Boreal any Finland | Greenpeace | Greenpeace Germany
Bebe kokoa avy amin'ny: Toekarena hafa
in Toekarena hafa, orinasa, politika, manan-danja
Tradition vs. Faharoa: fifanolanana amin'ny toetr'andro sy ho avy
in amin'izao fotoana izao, Toekarena hafa
Krizy Corona: ny banky kosa dia mitahiry mpividy mpividy fa tsy olona
in Toekarena hafa, politika, manan-danja
Trosa maneran-tany: iza no tompona an'izao tontolo izao?
in Toekarena hafa, Ny fanjifana maharitra, ara-tsosialy
Alina an-tserasera "The tantaran'ny plastika"
BIO-Strohhalme ho fankasitrahana eo amin'ny fiaraha-monina 20 PTS.
Zo momba ny tany ao Amazona Oxfam Etazonia
Vorondolo any amin'ny Ala Boreal any Finland | Greenpeace | Greenpeace Germany